ဂေဟာကို​အောက်​လမ်းနည်းနဲ့အတိုက်​အခိုက်​ခံ​ကြောင်း​ပြောပြလာတဲ့ ခိုင်​နှင်း​ဝေ - Celepedia
by celeadmin June 18, 2020 June 18, 2020
ပရဟိတ မင်းသမီး​လေး ခိုင်​နှင်း​ဝေဟာအလှူအတန်းရက်​​ရောသူတစ်​ဦးဖြစ်​ပြီး လိုအပ်​တဲ့​နေရာ​တွေကို လိုက်​လံလှူဒါန်းသူလည်းဖြစ်​ပါတယ်​။အခြားပရဟိတအဖွဲ့များ၌လည်းလုပ်​အား​ပေးအဖြစ်​ပါဝင်​လုပ်​​ဆောင်​မှုများလည်းရှိသလို သူမကိုယ်​တိုင်​ကလည်း မိဘမဲ့က​လေးများကို ပြုစု​စောက်​​ရှောက်​​ထားပါ​သေးတယ်။ မကြာခဏ အ​ခြေခံလူတန်းစားများအတွက်​ အလှူအတန်းများ ​ပေး​လေ့ရှိသူလည်းဖစ်​ပါတယ်​။လက်​ရှိမှာ​တော့သူမက​ဂေဟာကိုအသစ်​တိုးချဲ့​ဆောင်​လုပ်​​နေလျက်​ရှိပါတယ်​။
အားပေးချစ်ခင်သူပရိသတ်ပိုများသော်လည်း မထင်မှတ်ထားလောက်အောင် အောက်တန်းကျကျတိုက်ခိုက်ခံနေရကြောင်းကိုတော့ ခိုင်နှင်းဝေက မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ “မနေ့က ကျိုက်မရောဆရာတော်ကြီး ထံသို့ သွားရောက်ဖူးမျှော်ရင်း ဂေဟာ မှာ အတိုက်အခိုက် အတားအဆီးအနှောင့်အယှက်တွေရှိနေတယ်လို့ ဆရာတော်ကြီးက မိန့်ကြားပြီး ဂေဟာကိုလာစစ်ပေးဖို့ ဒီနေ့ပဲ ဆရာတော်ကျောင်းက အဘ တယောက်ကို ပင့်ဖိတ်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်တော့…. အဘက အာရုံပြုကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဂေဟာရှေ့က ရွက်လှပင်အောက်မှာ ရှိတယ်လို့ မိန့်တော့ ကျွန်မတို့ ချက်ချင်း ဆယ်ယူကြည့်တဲ့အခါ တကယ်ပဲအင်းပြားတွေ တွေ့လိုက်ပါတယ်ရှင်…. အဲဒီအင်းပြားက လူသေကောင်တွေမှာပတ်တဲ့အဝတ်စ.ပိတ်ဖြူနဲ့လုပ်ထားတာတဲ့… ကျွန်မ ကလေးတွေအတွက်တော့ စိတ်ပူမိတယ်… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မကတော့ အားလုံးကို မေတ္တာထားပါတယ်. ဒီလိုလုပ်တဲ့သူကိုလဲကျမ ဒီကနေမေတ္တာပို့လိုက်ပါတယ်ရှင်. စေတနာကောင်းရင်ကံကောင်းမယ်ဆိုတာကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်….
ဘယ်အောက်လမ်းနည်းနဲ့ပဲလုပ်လုပ်ကျွန်မရဲ့ သူတပါးပေါ်ထားတဲ့ တကယ့်စေတနာ နဲ့ ရိုးသားမူကို စိတ်လုံတဲ့အတွက် ဘာမှ မစိုးရိမ်ပါဘူးရှင်” ဆိုပြီး မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်​လိုလည်း ​ကောင်းမှု​တွေလုပ်​​နေပါ​စေမလိုမုန်းထားသူ​တွေက ရှိကြမြဲပါဘဲ။ Celepedia ပရိသတ်​​တွေလည်းခိုင်​နှင်း​ဝေတစ်​​ယောက်​ ဘယ်​လိုဘဲ အတိုက်​အခံ​တွေရှိရှိ ​ကောင်းမှုကုသိုလ်​​တွေဆက်​လုပ်​သွားနိုင်​ဖို့ ဆု​တောင်း​မေတ္တာ​ပို့​ပေးလိုက်​ဦး​နော်​။
ဇာတိရွာက မိတ်​​ဆွေ​တွေနဲ့အတူတူ​ပျော်​​ပျော်​ရွင်​ရွင်​နဲ့ ထမင်းလက်​စုံစား​နေတဲ့ ​နေမင်း
စတွေ့တုန်းက အင်္ကျီအရောင်ကအစ မှတ်မိနေတယ်ဆိုတဲ့ နေခြည်ဦး
စပွန်ဆာယူတယ် ယောက်ျားနောက်လိုက်ဖူးတယ်ဆိုတာ တကယ်မဟုတ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်လုံတယ်ဆိုတဲ့ မေကြည်